Budata Avast Free Antivirus 2021 maka Windows
Budata Avast Free Antivirus 2021
Free Budata maka Windows (0.22 MB)
Budata Avast Free Antivirus 2021,
Avast Free Antivirus, nke na-enye sistemụ nchedo virus anaghị akwụ ụgwọ maka kọmputa ndị anyị jiri nụlọ anyị na ebe ọrụ anyị ọtụtụ afọ, ka a na-emepe ma na-emelite megide egwu egwu
Kọmputa ọ bụla na-eji Ntanetị, nọ na ntanetị ọbụlagodi na ejikọghị ya na ,ntanetị, ejikọghị na netwọki ọ bụla ma ọ bụ na Internetntanetị, nwere ihe ize ndụ nje. Avast Free Antivirus, nke anyị nwere ike ịkwado dị ka mmemme antivirus dị mma iji chebe nsogbu nke ihe egwu a, nwere ihe ịga nke ọma na njirimara nje na mwepụ nje. Avast Free Antivirus gụnyere ma injin ya nke nyocha nje ya na injin nyocha nje virus nke AVG. Nke a na - eme ka nchekwa nchekwa gị bawanye.
Esi Wụnye Avast?
Anyị gbalịrị ịkọwa otu esi etinye Avast Free Antivirus, otu nime mmemme antivirus kachasị eji na kọmputa, na vidiyo dị nokpuru:
Avast Free Antivirus nwere ihe dị iche iche. Enwere ike ịkọwa ihe mmewere CyberCapture dị ka ụbụrụ njirimara nje nke na-etolite azụ nke ngwanrọ ahụ. Ọta Àgwà, naka nke ọzọ, na-ahụ na a na-enyocha kọmputa gị oge niile maka mmemme enyo. Avast Paswọdu Vault abụghị naanị na-enyere gị aka idebe okwuntughe gị, kamakwa na-echekwa gị nsogbu nke ịbanye paswọọdụ oge ọ bụla ị na-agagharị na ịntanetị. Avast Browser Cleanup na-ehichapụ ihe nchọgharị gị na, na-anapụta gị na ihe nchọgharị achọghị na-agbanwe na-agbanwe nchọgharị gị ndabara search engine na nụlọ peeji nke. Avast Wi-Fi Inspekta ana achi achi nche nke ikuku gị na netwọk. Smart ianomi, si eche ọnweghị nchedo okwuntughe na obi nkwụnye ins ka ochie software na otu Doppler; na-ahụ ihe ngbasa nke na-ekwe ka malware tinye usoro ahụ.Ekele maka Software Updater, mmemme niile etinyere na kọmputa gị ka edobere oge niile. Nnapụta Diski, nke bụ ụzọ kachasị mfe iji kpochapụ nje dị oke egwu nke nwere ike ịbanye nime usoro gị yana ọbụlagodi ịmalite na mbido, bụ netiti ngwaọrụ ndị Avast Free Antivirus na-abịa.
Avast Antivirus Njirimara
Antivirus: Nnyocha ọgụgụ isi na-achọpụta ma na-egbochi nje, malware, spyware, ransomware, na phishing scams.
Ọta Àgwà: Na-echebe gị pụọ na egwu na ụbọchị efu na ransomware site na ịchọpụta usoro omume enyo.
CyberCapture: Weghara faịlụ ndị amaghi. Ya mere, enwere ike nyochaa faịlụ ndị ahụ na igwe ojii iji chọpụta ma ha dị mma ma ọ bụ na ha adịghị.
Anti-Phishing: Na-akpaghị aka na-egbochi wayo na saịtị adịgboroja, ọ dịghị mkpa maka mgbakwunye ihe nchọgharị (plugins).
Onye nyocha WiFi: Na - egbochi ndị na - agba ọsọ site na ịchọpụta adịghị ike na ntanetị ikuku gị na akpaghị aka.
Mmelite Software: Na-edobe sọftụwia gị oge niile iji dozie nsogbu nchebe ma melite arụmọrụ.
Okwuntughe: Debe akaụntụ gị niile na iji otu paswọọdụ nnabata.
Nchọgharị mkpocha: Wepụ toolbars na ndị ọzọ tinye-ons ị na-achọghị ma ọ bụ mkpa si nchọgharị gị.
Iweghachite Disk: Mepụta ihe oyiyi Iweghachite na CD ma ọ bụ diski USB iji bido mgbe usoro a bu nje virus nke na-egbochi ya ịmalite.
Mgbanwe na-abịa na Avast Update 20.10.2442
Extended Paswọdu Nchedo - Ugbu a, anyị na-echebe gị okwuntughe na beta nsụgharị nke ihe nchọgharị. (Chrome, Edge, Firefox na AVG Secure Nchọgharị - Naanị ionsdị Asụsụ)
Iweghachite Disk ndozi - ndị ọrụ Windows 7 nwere ike ime emume ịmara atụmatụ a na-arụ ọrụ maka ha ọzọ, anyị emeela ka arụmọrụ ya dịkwuo mma ma jide naka na ọ na-ehichapụ ihe dị mkpa .DLL maka ndị ọrụ niile.
Ndozi ahụhụ - Naanị mmezi ahụhụ na-eme ka antivirus gị sie ike
Gịnị bụ New With Avast Free Antivirus Mmelite 20.9.2437
CyberCapture - Agbaghara ngosi? Nwere ike ịhụ nsonaazụ niile nke faịlụ enyo nke ị nyefere na ụlọ nyocha egwu anyị na ebe ngosi gị
Vasatail Paswọdu Nchedo - E wezụga Chrome na Opera, ị nwere ike ugbu a paswọọdụ chebe Microsoft Edge na ọkacha mmasị anyị, Avast Secure Browser.
Votu maka atụmatụ - Votu maka ihe kachasị amasị gị ma ọ bụ nyefee echiche gị maka atụmatụ ọhụrụ. Gaa na NchNhr> Banyere ma gwa Avast mmasị gị (naanị maka ndị ọrụ adịchaghị)
Arụ ọrụ arụmọrụ - Akụrụngwa gị antivirus ga-ebu ngwa ngwa ọbụlagodi na-agbakwunye ngwa ọrụ anyị na VPS.
Ime ohere support
Igwe ojii na-echebe
Eserese eserese English
Avast Free Antivirus 2021 Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.22 MB
Mmepụta: AVAST Software
Iji Ngwá Ọrụ Ransomware ihuenyo mkpọchi site na Trend Micro, ị nwere ike ihicha ihe mgbapụta nke na...
Site na RogueKiller, ị nwere ike inyocha mmemme niile na -arụ ugbu a na kọmputa gị wee gbochie...
Mmemme Autorun Injector bụ ngwa efu mana ọ bara uru nke na -enye gị ohere ijikwa Autorun zuru oke,...
Site na ngwa Cybereason RansomFree, ị nwere ike kpachara anya maka mgbapụta ransomware nke nwere...
Norton Power Eraser bụ mmemme efu nke na -agbakwunye nchekwa nchekwa na sistemụ gị, na -enye nchebe...
Ngwa HitmanPro.Alert na -enye nchebe pụọ na malware nke nwere ike imerụ kọmputa gị. Malware na...
RemoveIT Pro na -eme nyocha miri emi na kọmputa gị, na -achọpụta malware, nje, trojans, wdg. na...
Mmemme kamera echekwara apụtala dị ka ezigbo ngwọta megide mwakpo kamera na -enweghị ikike, nke bụ...
Ị nwere ike hụ ugbu a nchekwa nke ozi nkeonwe gị dị mfe site na Anti-Keylogger, nke ị nwere ike iji...
Autorun Virus Remover bụ sọftụwia na -aga nke ọma mepụtara iji nye gị ohere ichebe kọmputa gị pụọ...
Kaspersky Rescue Disk 18 bụ ngwa ọrụ nefu ị nwere ike iji weghachite kọmputa gị na malware. Iji...
Dọkịta Spyware bụ mmemme mgbochi spyware na-enye gị ohere ihichapụ spyware ma na-enye nchebe...
Anvi Smart Defender jiri amamihe na ike chebe kọmputa gị megide Trojans, adware, spyware, bots,...
Site na mmemme ndị ọkachamara kwadoro ka ọ bụrụ mmemme nchọpụta spyware kachasị elu, ị nwere ike...
Ngwá Ọrụ Iwepụ Ngwanrọ ọjọọ nke Microsoft bụ mmemme nchọpụta na mwepụ nke malware. Ihe mmemme a na...
SUPERAntiSpyware bụ mmemme spyware ọgbọ ọhụrụ ma ọ bụ mmemme iwepụ adware nwere teknụzụ nyocha...
AntiLogger na-echekwa nke ọma Nchedo Ozi gị na-enweghị mkpa nchekwa data mbinye aka, yana modul...
Noge a, e nwere ọnọdụ ndị dị ka nje virus na kọmputa anyị ọbụna mgbe dị nnọọ nchọgharị na internet....
SpyDLLRemover bụ ngwa nchọta spyware nke ọma na iwepụ ya. Ọ na-echekwa kọmputa gị site na inyocha...
FreeFixer bụ ngwá ọrụ na-ewepu freeware nke ga-enyere gị aka wepu ngwa ngwa na-achọghị dị ka nje,...
Autorun Angel bụ mmemme dị ike ma baa uru nke na-enye gị ohere ịchọpụta ngwa ngwa na ngwa ngwa nke...
Mberede nledo dị iche na mgbochi spyware ndị ọzọ yana usoro nyocha ngwa ngwa yana iwepụ nchekwa....
Akụrụngwa dị ike nke jikọtara ngwa niile ịchọrọ iji nwetaghachi kọmputa ndị ekpughere na malware,...
CounterSpy bụ spyware siri ike na mmemme iwepụ malware. Nihi mgbochi spyware a, nke na-arụ ọrụ...
Mmemme RegAuditor bụ ngwanrọ nchekwa nke nwere ike ịgwa gị ozugbo site na ịchọpụta adware, malware...
MalAware bụ mmemme na-aga nke ọma nke nwere obere nha nke naanị 1mb ma na-enyocha kọmputa gị maka...